postmarketOS v21.06 Service Pack 4 inotanga Phosh 0.14.0 | Linux Addicts
Pamabhurogu eLinux akasarudzika seLxA tinonyora zvakawanda zvenhau uye zvinyorwa nezve Linux software. Chatinovhara zvakanyanya idesktop software, asiwo iyo ine mabhodhi akareruka seRaspberry Pi (ARM). Chatisingade kusiya padivi ndechekutariswa kweLinux mapurojekiti enharembozha uye mahwendefa, uye tinozviita netarisiro yekuti vanogadzira havasiye uye vanoramba vachivandudza software yezvishandiso izvi zuva nezuva. Aya ndiwo maitiro ari kuita posrmarketOS Open Source Community, uyo maawa mashoma apfuura akakanda postmarketOS v21.06 Service Pack 4.
Makuru anogadziridza kune desktop anoshanda masisitimu anowanzo kuwedzera mamwe akawanda mapakeji nekuburitswa kutsva kwega kwega, kunyanya ayo anoburitsa vhezheni mwedzi mitanhatu yega yega kana makore maviri ega ega, asi postmerketOS v21.06 Service Pack 4 inosanganisira imwe iyo yega yatove yakakodzera kuvandudzwa: Phosh 0.14.0. Pho (ne) Sh (ell) 0.14.0 ndiyo ichangoburwa mushanduro yefoni yeGNOME, uye inounza shanduko huru.
Zvakanakisa zve postmarketOS v21.06 Service Pack 4
Phosh 0.14.0 inopa akati wandei ekuwedzera, kusanganisira tsigiro yeapp splash skrini uye mabhatani ekutsvaga eiyo media player widget.
Numberstation 1.0.0 ndiyo 2FA tokeni application inoonekwa mumusoro mufananidzo. Nechinhu chitsva chekutumira / kutumira kunze kwenyika chekukurumidza kutsigira uye kudzoreredza makiyi uye nekuafambisa pakati pemidziyo, pamwe nerutsigiro rutsva rweHOTP, yave kuonekwa sechinhu chizere. Mafaira ekuchengetedza anogamuchirwa muchimiro cheimwe otpauth: // URL pamutsetse. Kurutsigiro rweHOTP, makiyi akavakirwa pamakaunda kwete nguva. Shanduko dzakaitwa kune mushandisi interface kudzivirira kuwedzera iyi counter netsaona.
eg25-maneja 0.4.1, mubatsiri daemon yeEG25 modemu paPinePhone, yawana GNSS inoyamura tsigiro uye diki diki diki kuvandudzwa zvichienzaniswa neshanduro yavakange varongedza mubazi rakagadzikana.
Pixman achiri pane yazvino vhezheni yepamutemo 0.40.0 kubva Kubvumbi 2020 (sezviri pachena iyo yekumusoro haina kuburitsa kazhinji). Nekudaro, iyo ichangobva kubatanidzwa chigamba chakasarudzwa kushandisa NEON mirairo paArM64 zvishandiso mushure mekuve nayo paAlpine kumucheto kwechinguva. Pixman ndeye yakaderera CPU level kuumbwa uye raibhurari yekudhirowa inoshandiswa mune akawanda maapplication, saka izvi zvinoita kuti mafoni ese aarch64 aite zvishoma kudaira.
postmarketOS v21.06 Service Pack 4 ikozvino yave kuwanikwa seyakagadziridzwa kune avo vane sisitimu yekushandisa yakaiswa pane yavo Linux nhare kana piritsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » postmarketOS v21.06 Service Pack 4 inosvitsa Phosh 0.14.0 uye kuvandudzwa kweapp
Phosh 0.14.0 inosvika nerutsigiro rwesplash skrini